၂၀၀၈၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန်းလေး-ပုဂံ-ရန်ကုန်၊အပိုင်း (၁) | I Love Travellings . . .
I Love Travellings . . . A journey ofathousand miles must begin withasingle step.
HomeI love travellings …
၂၀၀၈၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန်းလေး-ပုဂံ-ရန်ကုန်၊အပိုင်း (၁)	ရန်ကုန်-နေပြည်တော်
ငါ့အတွက်မမေ့နိုင်ခဲ့တဲ့ခရီးကတော့….၂၀၀၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကပေါ့…ဘယ်သွားတယ်လို့တောင်ပြောလို့မရခဲ့ဘူး….တယေက်တည်း သွားခဲ့တာ….
ပထမဆုံးရန်ကုန်ကနေ နေပြည်တော်ကိုသွားတာ………သွားချင်းလွန်းလို့တော့ဟုတ်ဘူး……..စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေပေါ့…အဲဒီမှာ နေပြည်တော်ယူဇာ ပျိုလေး နဲ့တွေ့ …သူ့အဆောင်ကနေ သပြေကုန်းကိုလမ်းလျှောက်….နေပူထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတာ…….နေ့လည်ကြီးပေါ့….. ..ငါ့ကိုကောင်းကောင်း လမ်းလျှောက်ခိုင်းခဲ့တာ…….. သပြေကုန်းရောက်တော့ တောင်ပေါ်က ကြေးအိုးဆိုင်မှာ ငါ့ကိုကြေးအိုးတိုက်တယ်……ကောင်းမှကောင်း..မကျွေးချင်လို့လားမသိဘူး….. အဲဒီနောက်… သူကအဆောင်ပြန်…ငါကလိုက်သွား…..အဲ..မလိုက်သွားတော့ဘူး…….ငါလည်း…တည်းခိုခန်းပြန်….ရေချိုး…..အချိန်ကစောသေးတာနဲ့ တပ်ကုန်းသွားမယ်ဆိုပီး ပျဉ်းမနားကို ကားစီး…..တော်ဝင်ကားကြီးတွေပေါ့….. ပျဉ်မနားရောက်တော့ တပ်ကုန်းကား …..ဟိုင်ဟပ်ကားပေါ့..တက်စီး… ခါင်မိုးပေါ်ကနေ…. ကောင်းမှကောင်း လေလေး..တဖြူးဖြူးနဲ့……ပျဉ်းမနား နဲ့တပ်ကုန်း ကိုနီးနီးလေးလို့ထင်ထားတာ ၂နာရီကျော်စီးလိုက်ရတယ်….. တပ်ကုန်းမရောက်ခင် ရေဆင်းရောက်တော့ အသိဆရာမကို ၀င်တွေ့ဦးမယ်ဆိုပီး စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှာဆင်းပီးသွားတွေ့..တပ်ကုန်းကို ခရီးဆက်…..ရောက်တော့ညနေ ၄း၀၀. သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့…ပီးတော့သူဆိုင်ကယ်နဲ့မြို့ထဲပတ်… ဘာမှလဲရှိဘူး…မြို့ပြင်ထွက်…..MRTV-4 ရုပ်သံလွှင့်စက်ရုံဘက်ရောက်တော့….နွား အုပ်ကြီးနဲ့တန်းတိုးတာ…. ဘေးကနေကပ်သွားတာ…….အဲဒါနဲ့ဘေးနွားတစ်ကောင်ကို လှမ်းရိုက်လိုက်တာ….လိုက်ဝှေ့လို့ ဆိုင်ကယ်ကို အမြန်မောင်းပြေးရတယ်…. ကံကောင်းလို့…….အဲဒီကနေ…မြို့ထဲကိုပြန်ရောက်တော့ ညနေစာစား….
သူငယ်ချင်းကသူပါ နေပြည်တော်လိုက်မယ်ဆိုပီးလိုက်လာတယ်။ နေပြည်တော်ရောက်တော့ ည ၁၀း၀၀ ရှိပီ…ညစာစားပီးအိပ်တော့တာပဲ…….နောက်နေ့မနက် ..နိုင်ငံခြားရေးကိုသွား….စာရွက်တွေတင်ဖို့သွားတာ….ဟိုရောက်တော့ စာရွက်တင်မယ့်နေရာကဖွင့်သေးဘူး….ဒါနဲ့ လူကြီးကိုဖုန်းဆက်..နောက်တော့ စာရွက်တွေပေးလိုက်.. ၁၀မိနစ်လောက်ကြာတော့ လက်မှတ်ထို့ပီးပြန်ရောက်လာ……ကောင်းမှကောင်း…. ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ပြောပါတယ်…ဟီး..ဟီ…..နောက်တော့…ကျန်တဲ့အစိုးရုံးတွေသွား.ပီး….တွေ့သမျှ ၀န်ကြီးရုံးတွေဝင် သွားတွေ့… ၀န်ကြီးဟုတ်ဘူး…အဲဒီကတယ်ရင်တွေကိုပါ။ နောက်ပီး….ပလန်းနက်ယူဇာ မလေး(Mantal) ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးနှစ်ယောက် ကိုသွားတွေ့.. သူတို့ကျွေးတာတွေ အ၀စားခဲ့တယ်……..နောက်တော့ သပြေကုန်းကိုပြန်….မန်းလေးဆက်တက်ဖို့ကားလက်မှတ်ဖြတ်. …ကြယ်စင်ဟိန်းနဲ့… အားလုံးကကောင်းတယ်ပြောလို့.. .နေက်မှဆက်ပြောမယ်…ကောင်းကြောင်းလေးတွေ….ပီးတော့ တည်းခိုခန်းပြန်…ရေခ်ျိုး….ထမင်းစားပီး..ခဏအိပ်လိုက်တယ်…..ကားက တည်းခိုခန်းရှေ့ ည ၇း၀၀ လာခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်…..နိုးတော့ ၈း၀၀ ထိုးပီး…ကားကတော့သွားနှင့်ပီလို့ထင်ထားတာ….ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ဂိတ်မှဆီဖြည့်တုန်းတဲ့…..ဟီး..ဟီး…တော်သေး….အဲဂလာနဲ့ အထုပ်တွေဆွဲ…တည်းခိုခန်းက ဧည့်ခန်းမှထိုင်စောင့်နေ….. တည်းခိုခန်းဆိုလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်….. .နေပြည်တော်စည်ပင်ရဲ့တည်းခိုဆောင်လေ….. အခန်းကရှင်းလင်းနေတာပဲ…ကုတင် ၁လုံးလွဲရင်ဘာမှကိုရှ်ိဘူး…ငါ့ဘုန်းကြီးကျောင်း(ဆီဒိုးနား) နဲ့များကွာပါ့….အဲဒီတုန်းက.. ငါ့ကဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အလယ်အလတ်တန်း အရာမရှိတရှိလေးပေါ့.. . ကြုံတုန်းကြွားလိုက်တာ….. ၉း၃၀ တော့ ကားကြီးရောက်လာပါတယ်.. ..ကြယ်စင်ဟိန်းဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကြီးကဟီးလို့….နောက်ကြည့်မှန် နားမှာကပ်ထားတာ…. .ငါ့လက်ဖ၀ါးထက်တောင်ကြီးသေး…. ဟီး..ဟီး…..ကားကြီးလဲကြီးသလားမမေးနဲ့ ငါ့ လက်ဂေ့ခ်ျ တင်တာမဆန့်ဘူး……စပါယ်ရာနဲ့ နှစ်ယာက်သားမပီး…..သယ်ရတယ်…….သူကတော့အားပေးပါတယ်…အကိုလေး….ပျဉ်းမနားဂိတ်ရောက်ရင် ကားချိန်းပေးမှာပါတဲ့…..အဲဒါနဲ့ ပျဉ်းမနားဂိတ်ရောက်တော့ ကားလဲကြတယ်…..အဲဒီကားကတော့မဆိုးပါဘူး……တော်တော်လေးတောက်ပြောင်နေတာပဲ..အသစ်အတိုင်းပဲ.. ..မေးကြည့်တော့…ခုနမှ ဘော်ဒီရုံက ထုတ်လာတာတဲ့…..ကောင်းရော….ဂိတ်မူး….အဲ..ဂိတ်မှူးဆီက ပလန် ကိုတောင်းကြည့်တော့….ဘေးမှာထိုင်မယ့်သူက…. မိန်းကလေးနာမယ်….ဟီး…ဟီး… ကံဇာတာကတက်နေတာများ. ….အမယ်…မကသေးဘူး.. အလယ်ထိုင်ခုံမှာလဲ.. .မိန်းကလေးနာမယ်ပဲ….အဟဲ….. ဟုတ်နေတာ…..နောက်တော့….ထိုင်ခုံနံပါတ်ရှာ…၀င်ထိုင်…. ရင်တွေခုန်လို့ပေါ့… တက်လာပီကောင်မလေး.. ၂ယောက်..မဆိုးပါဘူး…ချစ်စရာလေး……တွေ……မန်းသူတွေနဲ့တူတယ်….ငါ့ဘေးကဖြတ်ပီး..ဟိုးနောက်မှာသွားထိုင်တယ်….
ကားတံခါးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်…ဘုရား…ဘုရား…..ကိစ္စကတော့ရှိသွားပီ…တေပီ..ဆရာ…….ကောင်မလေးပါပဲ..အသက်က ၂၅ ၀န်းကျင်….ဘော်ဒီက ပွင့်နီးပါး လောက်ပဲ…..ငါဘ၀တော့သွားပီ….အဲဒါနဲ့လာဝင်ထိုင်တယ်…ငါ့ဘေးကို….ဖြစ်ချင်တော့…..သူ့ဘော်ဒီနဲ့ ထိုင်ခုံထဲကိုဝင်လို့ကိုရဘူး….ကားပေါ်ကလူတွေ ၀ိုင်းရီနေကြတယ်….ငါကတော့ ကျိတ်ပီးငိုလို့….နောက်တော့…စပယ်ရာကလှမ်းပြောလိုက်တယ်….အစ်မလေး….စိတ်လျှော့လိုက်တော့တဲ့….ဒီမှာလာထိုင်ဆိုပီး…ယဉ်မောင်းဘေးက ခုံမှာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်….အဲဒီနေရာက ယဉ်မောင်ရဲ့ အထူးရွေးထားတဲ့…ကောင်မလေးက အလိုလို ငါ့နားရောက်လာတယ်….အဟေး…ဟေး….
အဲဒါတွေပြောနေတာနဲ့ပဲ ကားက ပျဉ်းမနားကနေကိုထွက်ရသေးဘူး….၁၁း၀၀ ထိုးတော့ ကားကထွက်ပါပီ……….. အဟဲ…..ဘေးကကောင်မလေးနဲ့ မိတ်လေးဘာလေးဆက်… ဘာညာသရကာနေကြာကွာစိပေါ့…..ဒီလိုနဲ့ဘယ်လို မန်းလေးဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတိဘူး……သူပြောမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ လား…..လား……. ဘူတာကြီးကိုမြင်နေရတယ်……အဲဒါနဲ့အသည်းအသန် စပယ်ရာကို အထုပ်ချခိုင်း….စာအုပ်ထုပ်ပီး…ကောင်းမလေးနာမယ်နဲ့ လိပ်စာ..ဖုံးနံပတ်ရေးခိုင်းလိုက်တယ်…. အဟီး..ဟီး…အဲဒါနဲ့နှုတ်ဆက်ပီးဆင်းလာခဲ့တယ်…..လိပ်စာကတော့အမှန်ဗျ…..သူမှတ်ပုံတင်ထုတ်တုန်းက ခိုးကြည့်ထားတား……ဟဲ..ဟဲ…..အောက်ရောက်တော့ လက်လေးလှမ်းပြ… ပီးတော့ဖုန်းဆက်တဲ့….ကားကြီးကတလိမ့်လိမ့်နဲ့ထွက်သွားရော…..ရင်ထဲမှာဟာတာတာကြီးကျန်ခဲ့တယ်……..ဟိုသီချင်းထဲကလိုပေါ့….
Rate this:Share this:FacebookTwitterGoogleEmailPrintLike this:Like Loading...	This entry was posted on November 5, 2011 by ဇေယျလင်းထင်. It was filed under Myanmar .	→